ANTOKO TIM : Raikitra ny ady an-trano eo amin’ireo mpikambana ankehitriny
Mifanenjika sy mifanipaka an-karona ireo mpikambana eo anivon’ny antoko Tim ankehitriny. 30 novembre 2020
Milatsaka ny didy jadona amin’ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina izay nanao fanambaràna fa hanohana ireo kandida natolotry ny lisitra IRD amin’ny fifidianana Loholona, izay hatao ny 11 desambra izao.
Nazava fa efa hatrany am-boalohany no tsy nankasitraka ny hanatanterahana ny fifidianana Loholona ny Antoko Tim izay tarihin’ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc. Rehefa tsy nahomby ny filazan’izy ireo fa tsy handray anjara amin’ny fifidianana dia ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina indray no nampiasainy ho sakana kanefa toa nandamoka hatrany izany. Ny sasany tamin’ireto farany mantsy dia sahy nanao fanambaràna fa hanohana tsy misy fepetra ny lisitry ny kandida natolotry ny Vovonana Isika Rehetra miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina na IRD, ary vonona ny handray anjara mavitrika amin’ny fifidianana. Raikitra ny ady an-trano eo anivon’ny antoko taorian’io fanambaràna izay tena nanaitra ny maro io. Nisy ny fanambaràna nataon’ny Sekretera jeneralin’ny antoko Tim, Randriamasinoro Rina afak’omaly fa hoesorina tsy ho anisan’ ny mpikambana ao amin’ ny antoko Tim ireo Ben’ ny tanàna sy mpanolotsaina nanao fanambaràna fa handray anjara amin’ ny fandehanana mifidy mandritra ny fifidianana Loholona izay hatao amin’ ny 11 desambra ho avy izao.
Antony, nolazaina fa tsy manaraka ary manohitra ny tenin’ ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo olom-boafidy lany tamin’ny anaran’ny Tim eny anivon’ny Kaominina ireo. Ireto farany anefa dia nanambara mazava fa zon’ izy ireo ny mandeha mifidy Loholona amin’ ny maha mpifidy vaventy azy ka hanatanteraka izany ry zareo. Mihenjan-droa araka izany ny tady, ka izao niteraka ady an-trano izao io. Manodidina ny 58 ny isan’ ireo Ben’ ny tanàna lany tamin’ ny antoko Tim manerana ny Nosy ary maromaro ihany ireo voafidy ho mpanolotsaina.
Ny fanapahan-kevitra izay noraisina tamin’ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina dia endriky ny fampiharana didy jadona sy didiko fehy lehibe eo amin’ ireo samy mpikambana. Tsy raharahian’ingahy sekretera jeneraly fa olom-boafidy manana ny zony ireo Ben’ny tanàna ireo ary indrindra indrindra manana ny hevitra izay heveriny fa hitondrana fampandrosoana ao amin’ny Kaominina nahalany azy.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2013) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021